Taloda qaranka - Krisinformation.se
TB24 Nationella råd So
Laga bilaabo 14 Diseembar ayaa waxa shaqeynaaya xeerarka qaranka ee laga sii adkeeyay iyo talobixinta guud ee ku saabsan inay masuulida qof kasta saaran tahay sidii looga hortegi/baaji fayruska covid-19. Dhamaan qof kasta oo bulshada ka mid ah, shakhsiyaadka gaarka ah iyo dadka waxqabadyada ka mas'uulka ahba waxa saaran masuuliyada ay ku qaadayaan tallaabooyin loogaga hortagaayo faafitaanka fayruska. Waxay taasi sidoo kale khuseysaa dabaaldaga xafladaha.
Uppdaterades 19 apr 2021 15:58
Kala duduwanaanshaha deegaanada/maxalliga ah ayaa imaan karta. Wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir gobolkaaga si aad ugu ogaato waxa shaqeynaaya. Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaadka xiriirka ee gobolkaaga.
Waxa adiga ku saaran masuuliyad shakhsi ahaaneed si aad naftaada iyo ta dadka kaleba uga ilaalineyso faafitaanka covid-19! Laga bilaabo 14 Diisembar ayay masuuliyad kaa saaran tahay inaad:
Haddii aad leedahay calaamado muujinaaya covid-19 waa inaad guriga joogtaa oo aad tijaabo iska qaadaa. Calaamaduhu waa qufaca, xumad, dhibaatooyinka neefsashda, duuf, sanka oo ku xidhan, cune xanuun, madax xanuun, xanuun murqaha iyo laabatooyinka, lalabo, dareenka urta iyo dhadhanka oo hoos u dhaca, shuban.
Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dhaqmaayo haddii adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan uu leeyahay calaamado ama uu covid-19 ku dhacay.här.
Kaliya la dhaqan dad kooxo tiro yar uun.
Kaliya la dhaqan/waqti la qaado dadka aad caadiyan la kulanto. Dadka aad la degan tahay ama dhowr asxaab ah uun iyo qaraabada qoyska ka baxsan.
Markasta masaafad u jirso dadka kale ee aad la kulmeyso waxaana fiican inaad banaanka ku soo wada kulantaan.
Waxa dadka la tallaalay saddex todobaad ka dib markay dawska koowaad qaataan ay la kulmi karaan dadka ka tirsan dhowr qoys oo kala duwan. Laakiin ka fikir inaad weli fayruska qaadi karto. Waxa sidaas darteed muhiim ah in la sii wato in la sii ilaaliyo dadka ka tirsan kooxaha la wada dhaqmo ee kooxda khatarta ugu jira ka midka ah.
Masaafad u jirso dadka kale oo iska ilaali meelaha saxmad/ciriiri badan leh
Markasta dadka kale u jirso masaafad. Waxay taasi khuseysaa meelaha gudaha ah iyo banaanka/dibaddaba labadaba.
Iska ilaali goobaha sida dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo gaadiidka dadweynaha haddii ay saxmadi ka jirto.
Kaligaa soo adeego oo dukaamada ha dhex joogin wakhti ka badan intii caadi ahaan loo baahan yahay.
U safar sida ugu suurtogalsan ee aan fayruska la iskugu qaadsiineynin.
Iska ilaali gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka noocyada kale ah ee aan tigidh kuri lagu xajisto/qabsado la iibsan karin .
Iska ilaali inaad dad cusub la kulanto xiliga safarka gudahiisa iyo meesha aad u socoto.
Haddii aad ku qasbanaato inaad shaqada aado waa inaad xiliyada shaqada u qorsheyso si aad saxmad/ciriiri badan ee gaadiidka dadweynaha iyo goobaha shaqada iskaga ilaaliso.
Nadaafada gacmaha aad loo ilaaliyo.
Si fiican joogto ugu dhaq gacmaha saabuun iyo biyo.
Markasta dhaq gacmaha cuntada ka hor iyo markaad musqusha aado ka dib iyo markaad joogto ba'adaha dadweynaha.
Taxaddar samee markaad booqaneyso dadka 70+ ah ama ka tirsan kooxda khatarta ugu jira.
Hubi inaad raaceyso dhamaan talooyinka iyo tilmaamaha. Waxa halkan ku yaala mer information oo ku saabsan sida aad si ammaan ah dadka ula kulmayso/ugula dhaqmayso. (Macluumaadku waxa uu ku qoran yahay Iswiidhish.)
Booqashada Guryaha dadka waayeelka waa inay u dhacdaa si amman ah. Raac nidaamka/jedwalka soo booqdayaasha.
Haddii uu covid-19 kugu soo dhacay xiligii guga, ayaan la hubin inay weli sii leedahay khatar ka hooseysa oo aad ku qaadeyso ama dadka kale ku qaadsiineyso.
Wax dheeraad ah ka akhri
Masuuliyadaada qof kasta saaran ee "xeerarka iyo taloda guud ee ka socota Folkhälsomyndighetens kuna saabsan masuulida qof kasta saaran in laga hortego/baajiyo fayruska covid-19"(Macluumaadku waxa uu ku qoran yahay Iswiidhish)
Waxyaalaha ku saabsan sida aad bulshada ula dhaqmi karto oo aad si fayruska amaan ka ah ugu safri karto inta lagu jiro xiliga kirismaska iyo sannadka cusub bogga internetka ee Folkhälsomyndighetens (macluumaadku waxa uu ku qoran yahay Iswiidhish).
Waxyaalaha ku saabsan sida aad naftaada iyo ta dadka kaleba ugu ilaalin karto bogga internetka ee Folkhälsomyndighetens (macluumaadku waxa uu ku qoran yahay Iswiidhish).